Umphathiswa wezoKhenketho eJamaica Ulusizi kakhulu ngeNgozi yaseTrelawny
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zaseJamaica zokuPhula » Umphathiswa wezoKhenketho eJamaica Ulusizi kakhulu ngeNgozi yaseTrelawny
Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Iindaba zikaRhulumente • Icandelo lokungenisa izihambi • Iindaba zaseJamaica zokuPhula • iindaba • Tourism • uthutho • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel
UMphathiswa wezoKhenketho waseJamaica oHloniphekileyo. U-Edmund Bartlett uvakalise usizi ngengozi eyenzeke izolo eTrelawny, esube ubomi bomntu omnye yaza yenzakala abanye abaliqela.
UMphathiswa wezoKhenketho eJamaica wenze amazwi ovelwano kwiintsapho nezihlobo zabangasekhoyo kwingozi yebhasi yabakhenkethi.
Ukwanqwenelele ukuchacha okukhawulezileyo bonke abakhenkethi abasindileyo kule ngozi.
Abakhenkethi abahlanu basiwa eFalmouth Hosptial ukuze bafumane unyango, nangona kunjalo, umqhubi webhasi yabakhenkethi wasweleka ngenxa yokwenzakala kwakhe.
“Ndibuhlungu kakhulu xa ndisiva ngale ngozi kwaye ndiyazisola ngokuphulukana nobomi kunye nokwenzakala izihlandlo ezininzi. Oku kulishwa kakhulu kwaye, egameni le Icandelo loMphathiswa Wezokhenketho kunye nemibutho yayo yoluntu, ndivakalisa uvelwano kwiintsapho zabo nezihlobo zabangasekhoyo kunye nokuchacha okukhawulezileyo kwabonzakeleyo,” utshilo uMphathiswa uBartlett.
Izolo, ibhasi ebithwele abatyeleli behotele iye yantlitheka nesinye isithuthi kwindlela iDuncans Main eTrelawny. Abantu abahlanu baseMelika kunye nabemi ababini baseCuba baye basiwa kwisibhedlele saseFalmouth ukuze bafumane unyango. Umqhubi wesinye isithuthi wasweleka.
The Ibhodi yabakhenkethi yaseJamaica uqalise imigaqo efunekayo kwaye unxibelelana nezalamane kunye nabasemagunyeni abafanelekileyo.